ဆူရှီ - ဝီကီပီးဒီးယား
စားသုံးရန် အသင့်ဖြစ်နေသော နိဂိရိ ဆူရှီ အမျိုးမျိုး
ဆူရှီ (すし, 寿司, 鮨?, အသံထွက် [sɯꜜɕi] သို့ [sɯɕiꜜ]) ဆိုသည်မှာ ဂျပန်စားစရာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ချက်ပြုတ်ပြီး ရှာလကာရည်ဖြင့် ရောနယ်ထားသော ထမင်းကို ငါးနှင့် အခြားပင်လယ်စာ အစရှိသည့် စားစရာ တို့နှင့် ရောစပ်ပြီး လိပ်ထားသော အရာဖြစ်သည်။
ပါးပါးလှီးထားသော ငါးကိုမူ ဆာရှိမိ ဟုခေါ်ပြီး ဆူရှီနှင့် မတူပဲ ကွဲပြားခြားနားသည်။ နိုရိ ဟုခေါ်သည် အခြောက်လှမ်းပြီး ပြားနေအောင် ဖိထားသော ပင်လယ်ရေညှိနှင့် လိပ်ထားသော ဆူရှီကို မာကိဇူရှီ ဟုခေါ်သည်။ ကြော်ထားသော တို့ဖူး အတွင်း စားစရာများကို ပြွတ်သိပ်ထည့်ထားသော ဆူရှီကိုမူ အိနာရိဇူရှီ ဟုခေါ်သည်။ ဆူရှီ ဆန်၏ အပေါ်တွင် စားစရာများ ဖြန့်ကျဲထားသော ဆူရှီကိုမူ ချိရာရှိဇူရှီ ဟု ခေါ်သည်။
ဆူရှီသည် ထမင်းကို Vinegar(ရှာလကာရည်)ဖြင့်နယ်ကာ အပေါ်တွင် ငါးမျိုးစုံ ၊အသားမျိုးစုံ နှင့် အသီးအရွက်များကိုတင်ပြီး လှပစွာ ပြင်ဆင်စားသုံးရသော အစားအစာဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှအပ အခြားနိုင်ငံများတွင် ဆူရှီကို Sashimi(သို့)Raw fish(လတ်ဆတ်စွာပြင်ဆင်ထားသော ငါးအစိမ်း)နှင့် မှားတတ်ကြသည်။ Sushi ဆိုသည်မှာ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် "ချဉ်သည်"ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ဆူရှီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Nori ခေါ်ရေညှိခြောက်ထဲတွင်ထည့်လိပ်ထားသော မာကိဇူရှီ (Makizushi) ၊ ထမင်းကို လက်ဖြင့်လုံးကာ အပေါ်တွင်အသားငါး၊ အသီးအရွက်များတင်ထားသော Nigirizushi ၊ အစာများကို Tofu ခေါ်ပဲပြားဖြင့်ထုတ်ထားသော အိနာရိဇူရှီ (Inarizushi) ၊ အစာများကို ပန်းကန်ထဲရှိ ထမင်းဆုပ်များပေါ်တွင် ဖြန့်တင်ထားသော ချိရာရှိဇူရှီ (Chirashi-zushi) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဆူရှီလုပ်ရာတွင်အဓိကယူဆချက်မှာ ငါးကိုဆား ၊ ထမင်းဖြင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်း(သို့) တာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအချဉ်ဖောက်နည်းကို ယနေ့တိုင် ငါး၊ ဆန်နှင့် အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ဟင်းလျာများဆက်လက်ရှိနေသော အရှေ့တောင်အာရှတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါးကိုထမင်းနှင့်အချဉ်ဖောက်ခြင်း၏ ယူဆချက်မှာ အချဉ်ဖောက်ရာတွင်သုံးသော ထမင်းမှထွက်လာသောအချဉ်ရည်သည် ငါးကို Amino acids များအဖြစ် ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါမှ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် Umami ဟုခေါ်သော အရသာငါးပါး ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဂျပန်တွင်ရှေးအကျဆုံးဆူရှီဖြစ်သည့် Narezushi သည်လည်း ယင်းအချဉ်ဖောက်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင် Narezushi မှ Oshizushi ၊ ထိုမှတဆင့် ယနေ့အားလုံးက ဆူရှီဟုသိကြသော Edomae nigirizushi အဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်ဆူရှီများသည် ယခင်ရှေးဆူရှီများနှင့် ဆင်တူမဟုတ်တော့ချေ။ ယခင်ဆူရှီများမှာ ငါးကိုထမင်းနှင့်အချဉ်ဖောက်ကာ ထမင်းကိုလွှင့်ပစ်ပြီး ငါးကိုသာစားကြသည်။ အနံ့အရသာပြင်းသော Narezushi တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Funazushi ကို ဂျပန်နိုင်ငံ Biwa ရေကန် အနီးတွင်ပြုလုပ်ရောင်းချပါသည်။ ထို Funazushi သည် ရှေးဆူရှီများကဲ့သို့ပင် ငါးကိုထမင်းနှင့်အချဉ်ဖောက်ကာ ထမင်းကိုလွှင့်ပစ်ပြီး ငါးကိုသာစားရသောဆူရှီဖြစ်ပေသည်။
↑ If You Knew Sushi. Urban Legend Reference Pages. February 20, 2007
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆူရှီ&oldid=696608" မှ ရယူရန်